नाकको हड्डी भाच्ने धम्की दिने मेयर : 'आईमाई' भन्दै अपमान गरेपछि अफिसमा ताला - Kantipath.com
बारम्बार विवादित विषयले चर्चामा आइरहने इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी फेरि विवादमा परेका छन्। कार्यालयमा सेवा लिन आएका महिलालाई अपशब्द बाेल्दै दुर्व्यवहार गरेकाे भन्दै महिला अधिकारकर्मीले उनीविरुद्ध आन्दोलन थालेका हुन्।
नाराबाजी गर्दै विराेधमा उत्रिएका महिला अधिकारकर्मीहरूले बुधबार मेयर चौधरीको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन्। मेयर चौधरीले केही दिनअघि कार्यकक्षमै महिला सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गरेकाे आरोप लागेको हाे।
सरकारी सेवा लिन गएका बेला मेयर चौधरीले ‘यो आइमाईलाई कसले भित्र छिरायो’ भनेर अपमान गरेको आरोप छ। आन्दोलनरत महिलाले बुधबार उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यालय परिसरमा ‘संयुक्त विरोध कार्यक्रम’ गरेका हुन्। उनीहरूले चौधरीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। कारबाही नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
यसअघि पनि उनले पत्रकारको नाक भाँच्न बजेट छुट्याएको तथा महिलालाई नै दुर्व्यवहार गरेको लगायत घटना सार्वजनिक भएका थिए। इटहरीकै पत्रकार विराट अनुपमलाई फोन गरी मेयर चौधरीले नाकको हड्डी भाँच्न एक करोड छुट्याएर राखेको बताएका थिए ।
पत्रकार अनुपमसँग अपशब्द बोल्दै ‘अब तेरो नाकको हड्डी भाँच्न बाँकी छ । त्यसको लागि मैले एक करोड छुट्याएको छु । एक घडेरी राखेको छुँ’ भन्दै धम्क्याएका हुन्। आफ्नो फेसबुक पोस्टमा ‘चाटुकार पत्रकार’ भनेर कमेन्ट गरेपछि किन यस्तो गरेको भनेर फोन गरेका अनुपमलाई मेयर चौधरीले धम्की दिँदै भने, ‘तिमीले केके लेख्न बाँकी राख्या छौ ? तिम्रो नाकको हड्डी भाँच्नलाई एक करोड छुट्याको छु। एउटा घडेरी छुट्याएको छु । तेरो नाकको हड्डी भाँच्न मात्रै बाँकी छ । अब म गुण्डागर्दीमै उत्रिएँ। तेरो नाकको हड्डी भाँचेर मात्रै मलाई सन्तोष हुन्छ भाइ।’
Previous Previous post: नेकपा (एस) को बैठक आज पनि : महासचिव चयन हुँदै
Next Next post: पुर्व मुख्यसचिव तथा राजदुत लिलामणि पौडेल माओवादीमा !
याे हाे ‘मनपरी’ बोल्न मिल्ने नेपालकै अनौठो ‘अश्लील मेला’
कोरोनाअघि क्याम्पसबाट फर्किएकी छोरी कसरी भइन् गर्भवती ? आमाबाबु मिलेर बिभत्स हत्या
ई-मेल: [email protected], [email protected]com